Omby iray hafa indray no maty tao amin’ny orinasa AAA Tiko Andranomanelatra omaly maraina. Efa nandamaka sy tsy nahazaka tena moa ity omby ity tamin’ity herinandro ity ary efa nanomboka tsy nety nihinan-kanina intsony satria vilona fotsiny sisa no omena azy ireo noho ny tsy fahafahan’ireo fiara mitatritra ny provandy hohaniny.
Raha tsahivina dia 8 andro omaly alakamisy no nandraisan’ny Prefektiora sy ny OMC fanapahan-kevitra tsy ahafahan’ny fiara mivezivezy tao amin’ny faritry ny ozinina Andranomanelatra, kanefa dia mila vilona hatrany amin’ny 8 kamiao ireto omby ireto, izay any ivelany avokoa no misy ireo tanim-bilona. Ankoatra izay, mila provandy avy any ivelany ihany koa ireto omby vahiny ireto, izay saro-pady tanteraka ny fikarakarana azy, satria ireo omby “Holstein”, ireto marefo ara-tsakafo ireto.
Raha nangingina i Andry Rajoelina taorian’ny fampahafantarana ilay vina IEM, dia nipoitra indray omaly nandritra ny fankalazana ny andron’ny vehivavy tany Ambilobe. Nampiavaka izany ny nitondrany fanalahidy lehibe mitovy amin’ilay natolotra an-dRajaonarimampianina fony izy namindra fahefana. Ny nahagaga kosa dia ny namelan’ny HVM namory olona tsy nisy sakantsakana, toy ny atao amin-dRavalomanana. Miverina mifanohana sa mitsikombakomba ny samy taranaky ny fanonganam-panjakana, ka lasa sinema ny adiady hatrizay ?
Nipoitra ary sahy niseho indray ny Vehivavy TIM nandritra ny fankalazana ny andron’ny vehivavy ny 8 martsa 2018, tao Antsirabe. Nandray anjara feno tamin’ny hetsika rehetra teo amin’ny kianjan’ny fahaleovantena izy ireo, izay notarihin’ny filoham-boninahitra, Rtoa Raoelison Harinirija Chaterine, vadin’ny solombavambahoaka Antsirabe voalohany. Nambarany fa miara-mientana amin’ny vehivavy rehetra ny vehivavy Tim ary sahy sy miseho amin’ny fandraisan’andraikitra. Taorian’ny diabe sy ny fialaharana niarahan’ny rehetra moa dia mbola nitohy teny amin’ny efitrano malalaky ny Tim Vatofotsy izy ireo ary nisy ny fifampizarana sy fifanentanana ho an’ny fampandrasiana andraikitra ny vehivavy amin’ny asa fampandrosoana sy ny fiombonam-po eo amin’ny samy vehivavy.
Nandray anjara mavitrika niaraka tamin’ny vadin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny hetsika nanamarihana ofisialy ny andron’ny vehivavy 08 martsa 2018 ireo vehivavy 322, miasa ao amin’ny minisitera. Niombon-kevitra tanteraka ihany koa tamin’ny lohahevitra noraisina tamin’ity taona ity amin’ny fanandratana ny fiainan’ny vehivavy mpikatroka na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra. Niavaka ny fanamian’izy ireo nandritra ny diabe niraisana omaly.
Niteraka voka-dratsy ho an’ny fianakaviana iray tao amin’ny fokontany Fiadanana-Antsirabe ny rotsak’orana nisesy iny. Trano nisy rihina iray mantsy no nirodana ny harivan’ny talata 6 martsa lasa teo. Raha ny fanazavan’ireo tompon-trano dia tokony ho tamin’ny 6 ora hariva no nirodana ny trano. Tsy nisy ny naratra na namoy ny ainy fa olona 6 mianaka kosa no tsy manan-kialofana amin’izao fotoana.
Raha adiny roa monja teo aloha no sahaza ny saram-piantsonana 1 amin’ireo toerana tantanin’ny Easy park dia efa lasa ampy hiantsonana ora 4 izany ankehitriny. Tsy voatery handoa ny sara eny amin’ireo fitaovam-pandraketana azy na ny « Horodateur » koa ireo mpanjifa fa efa afaka mandoa izany amin’ny alalan’ny finday.
Toy ny poizina, izany hoe misoko mangina, ny kapa ranjo ataon’ny fitondrana amin’ireo kandida heverina ho matanjaka amin’ny fifidianana depiote, indrindra fa filoham-pirenena amin’ity taona ity. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana moa no hita ho tena lasibatra satria tsy takona afenina intsony ny antsojay ataon’ny fanjakana aminy na amin’ny alalan’ny fanapotehana ny orinasany na amin’ny sotasota mahazo ny mpitantana ny CUA.
TONGA SAINA IREO NANENJIKA
Na dia eo aza ny fihantsiana isan-karazany ataon’ny fitondrana Rajaonarimampianina ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, dia mahagaga fa mbola mangina ihany ny tenany hatramin’izao. Ireo mpanao politika noheverina ho tsy nifankahazo taminy teo aloha indray ankehitriny no vaky vava sy miaro azy hoe efa mihoatra ny loha ny sompatra ataon’ny fanjakana. Anisan’ny nanaitra tamin’ireny mpanao politika ireny, ohatra, ry Pety Rakotoniaina sy Gilbert Raharizatovo.
Hanatanteraka hetsika lehibe eny Anosy anio ny Randram-baon’ny sendika na ny SSM, ahitana sendika hatrany amin’ny 70 isa. Tsy mifanaraka amin’ny vidim-piainana amin’izao fotoana izao intsony ny karama, hoy izy ireo. Hanentanana ny mpiasam-panjakana manerana ny nosy ny hetsika.
Lehilahy miisa valo no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny Commissariat Central Tanjombato noho ny resaka vaky trano sy halatra arahina fikambanan-jiolahy teny Tanjombato. Mpiambina tao amin’ilay orinasa ihany ny fito amin’izy ireo.